NEVER BE THE SAME Tour 2018 ကိုကြေညာလိုက်တဲ့ Camila
On February 15, 2018 By fairy
Havana သီချင်းပိုင်ရှင် Camila ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Solo Tour Never Be The Same Tour 2018 နဲ့ ဖျော်ဖြေသွားမယ့်ရက်စွဲတွေကို အသိပေးလိုက်ပါပြီ။
Hollywood အဆိုတော်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း album တစ်ခုထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ Tour လုပ်တာမျိုးဆိုပေမယ့် တစ်ခုထူးခြားတာက Camila ဟာ ဒီ tour ကို သူ့ album နာမည်မဟုတ်ပဲ ပြောင်းထားတာလေးပါ။ ဖြစ်နိုင်တာက သူ့ album ထဲက လူကြိုက်များတဲ့သီချင်းဒါမှမဟုတ် သူ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းမို့လို့ Never be the same ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Never be the same tour ကို သုံးလပိုင်းလောက်ကနေစမှာဖြစ်ပြီး USA နဲ့ UK မှာပွဲအများဆုံးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဆက်ပြီး ဖျော်ဖြေဖို့ အစီအစဉ်ရှိပုံရပါတယ်။
Tour အတွက် လက်မှတ်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက် မှာ presale အနေနဲ့ စရောင်းမှာဖြစ်ပြီး general sale ကတော့ ၁၆ရက်နေ့မှာ စရောင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ လက်မှတ်တွေကို camilacabello.com မှာစတင်ဝယ်ယူနိုင်သလို တခြား online ticket site တွေကလဲ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ Camila ရဲ့ VIP ticket တွေရောင်းလို့ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်တချို့ကို ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့အတွက် လှူဒါန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
သူ့ရဲ့ official facebook ကနေ ဒီ tour အတွက် announce လုပ်ထားတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ထားခဲ့ပြီး အဲ့ပို့စ်အောက်မှာလဲ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ camilizer? လေးတွေကလဲ ထောင်ပေါင်းများစွာသော comment တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း တွေ့ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး၊ အရမ်းပျော်မိပါတယ်၊ အမြဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့ comment လေးတွေပါသလို ငါ့နိုင်ငံကိုလဲလာပါ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ လာဖျော်ဖြေမယ့်နေ့ကိုစောင့်နေမိတယ် ဆိုတဲ့ comment လေးတွေကတော့ အများဆုံးပေါ့နော် (add me ဆိုတဲ့ comment မျိုးတော့ မမြင်မိဘူး ?)
Fifth harmony ကထွက်ပြီး အချိန်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တစ်ကိုယ်တော်အနေနဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့ Camila ရဲ့ Very First Solo Tour လေးလဲအောင်မြင်ပြီး World Tour ကြီးထိဖြစ်လာနိုင်ပါစေလို့ myanmargroove ကဆန္ဒပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
PREVIOUS POST Previous post: မန်းလေးထိသွားပြီး Valentine surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း
NEXT POST Next post: K-Pop Idol တွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေက အတော်ဆုံးလည်းဆိုတာကို Idol အယောက် ၁၀၀ ကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ